Ny sary voalohany amin'ny Samsung Galaxy Note 5 dia tonga | Androidsis
Saika manodidina ny Samsung Galaxy Note 5. Rehefa mankafy ny torapasika sy ireo andro miaraka amin'ny fianakaviana isika dia hiseho eo imasontsika izany amin'ity hetsika ity Unpacked 2 2015 izay hanana ny datin'ny fankalazana ny 13 Aogositra. Ny andro mafana dia mety hitovy amin'ireo mpitantana Samsung izay manandrana amin'ny fomba rehetra hamerina ilay fahombiazana lehibe sy ny fanapahana nananany taona vitsy lasa izay. Tsy izany no ilazako fa tsy nahatratra ny fiaran-dalamby izy ireo, saingy eny fa nisy lanjany mavesatra nipoitra tao amin'ny peratra izay tena manahirana azy.
Mandra-pahatongan'ny fotoana Galaxy Note 5 dia nanana ny tsaho mahazatra sy ny fikajiana azy izahay ary hiara-hiasa amin'ny S6 Edge Plus, ilay zokin'ilay sainan'i Samsung amin'ity taona ity ary nahagaga anay kely izany. ankehitriny izay ananantsika dia sary voalohany an'ny Samsung Galaxy Note 5 vaovao ary ny sisin'ny Galaxy S6 + izay handray anjara amin'ny vaovao mandritra ny herinandro ho avy sy amin'ny volana Aogositra rehetra.
1 Sary voalohany an'ny Galaxy Note 5 sy S6 edge +
2 Tsaho, sombiny ary karatra SD
Sary voalohany an'ny Galaxy Note 5 sy S6 edge +
Mahazo ny sary voalohany an'ny Galaxy Note 5 izahay ary ny sisin'ny S6 + dia fantatra tsara amin'ny efijery an-trano na dia milaza ilay maodely aza, izay manamarina ny fahamarinan'ny sary sy ny amin'ny akaiky an'io 13 Aogositra io izay hahafantarantsika ny zava-drehetra amin'ireo biby roa volontsôkôlà ireo izay efa havoaka.
Galaxy Note 5 izay manaraka ny hita tamin'ny fanontana teo aloha na dia nisy fiovana lehibe aza ny fananana ny vera fitaratra rehetra, izay midika fa manaraka ny fiovana hita amin'ny Samsung Galaxy S6. Ka toa toa hanana vera mandritra ny fotoana fohy isika miaraka amin'ireo maodely avo lenta farany havoakan'ny mpanamboatra Koreana manomboka izao.
Momba ny sisin'ny S6, inona no holazaina Io no kinova taloha an'ny Galaxy S6, Ka noho izay ilainao maniry chicha kely kokoa aorian'ny S6, azo antoka fa mahafeno ny antenaina sy ny filan'ny geekiest ao amin'ny fianakaviana ity maodely ity.
Tsaho, sombiny ary karatra SD
Hatreto dia ny masontsivana mipoitra avy amin'ireo tsaho samihafa izay miaraka amin'ireo karazana famotsorana ireo dia mitarika antsika alohan'ny Note 5 miaraka amin'ny efijery Super AMOLED QuadHD 5,6-inch ary fakan-tsary 7433-bit 64-bit an'ny Samsung Exynos XNUMX izay ahitantsika ny vahaolana chip tokana voalohany izay manambatra ny GPU, RAM ary ny tahiry anatiny ao amin'ny SOC.
Ao amin'ny fitaovana dia manana koa isika RAM 4 GB, fakan-tsary 16 MP eo aloha, eo aloha 5MP, famandrihana tsy misy tariby ary ho tonga amin'ny loko efatra: mainty, fotsy, volamena ary volafotsy.
Ny tsaho izay manana ny betsaka dia momba ny karatra microSD izay mety hiseho amin'ny Galaxy Note 5, na dia hahagaga ihany aza, Samsung dia mety tsy hanana risika loatra amin'ny fandefasana ity fitaovana ity miaraka amin'ny slot SD. Maka risika satria raha mandefa ny Galaxy Note 5 ianao, maninona no tadiavin'ny mpampiasa Galaxy S6 tsy misy microSD na dia kely aza ny vidiny?
Mikasika ity tsaho ity, iray amin'ireo maodely Galaxy Note 5 dia mety hanana microSD Fa tsara kokoa ny miandry ny fanamafisana ofisialy alohan'ny hanaovana fifandonana lehibe amin'izany, satria ny tsy fisian'ny slot microSD ao amin'ny S6 dia niteraka fitsikerana be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny sary voalohany amin'ny Samsung Galaxy Note 5 dia voasivana